တိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးကအမြဲတမ်းထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်လိုလား - လေးစား, ကောင်းသော, ဖက်ရှင်စားဆင်ယင်ကြည့်ရှု! သို့သော်အခါရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလကြွလာ, ဆောင်းရာသီအဝတ်ကောက်ဖို့ဘယ်လိုတစ်ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာလည်းမရှိ။ အေးရာသီ, အချိန်များတွင်, ငါတို့ကိုအများကြီးသာအပူသက်ဆိုင်ရာနေကြတယ်, ဂုဏ်အသရေအကြောင်းကိုမေ့လျော့စေသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်အရာရာပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်: ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်နာများ၏အားထုတ်မှုမှကျေးဇူးတင်စကား, အမျိုးသမီးအဝတ်အစား၏ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလစုဆောင်းခြင်း, ထိုအမျိုးသမီးအငြိမ့်ဝတ်စားဆင်ယင်ခွင့်ပြုပေမယ့်အဖြစ်တောက်ပဆက်လက်တည်ရှိခြင်းနှင့်မျက်စိ-လျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်မသာ!
မိန်းကလေးများအဘို့ဖက်ရှင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဝတ်အစား, တိုတောင်းတဲ့ကုတ်အင်္ကျီ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖယ်ထုတ်, Emporio Armani, Burberry Prorsum နှင့် Emilio Pucci ကဲ့သို့သောကမ္ဘာကြီးအမှတ်တံဆိပ်ပေးအပ်သည်။ ဣတ္နှင့်ကြော့မော်ဒယ်နွေးရရှိသွားတဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းအားလုံး 100% မှာကြည့်ဖို့မကူညီမှသာ! အရောင်မျိုးစုံ, စတိုင်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောအထည်များရရှိနိုင်မှု, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို - Bottega Veneta ။ ထိပ်တန်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွက်ဒီဇိုင်နာအမျိုးသမီးရဲ့အဝတ်အစား - ထိပ်ပေါ်မှာဆက်နေရန်ပိုနှစ်သက်သူများအတွက်တစ် godsend ။
ဒီနှစ်တွင်လည်းသက်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရေးရာသားရေကိုဆောင်းတွင်းအဝတ်အစား။ ဒီမြင်နိုင်ရန်, Helmut Lang များစုဆောင်းခြင်းမှာကြည့်ယူပါ။ chic နှင့်ကျော်ကြားသောဒီဇိုင်နာများလုပ်သာမန်ထက်မော်ဒယ်များမိုးကာအင်္ကျီ, တစ်ဦးချင်းစီကမိန်းကလေးမှသင့်လျော်သည်မဟုတ်, သငျသညျလူအစုအဝေးထဲကနေထွက်မတ်တပ်ရပ်ခြင်းနှင့်မူရင်းကြည့်ရှုလိုလျှင် - သင်သည်အဘယ်အရာကိုကြည့်ဖို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြိုးစားရန်ပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းမိန်းကလေးတွေအမြဲပြင်သစ်တွင်ဖက်ရှင်နှင့်ကြော့ကြည့်ရှုသိတယ်။ ဒါကြောင့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ပဲရစ်တက်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လို၏မေးခွန်းကိုသင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်။ ပဲရစ် - ဖက်ရှင်ကမ္ဘာ၏မြို့တော်အများစုပြပွဲသည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အကဖက်ရှင်လုပ်ငန်းအရှိဆုံးထင်ပေါ်ကျော်ကြားကိန်းဂဏန်းများအများစုမှနေအိမ်ကြောင်းပြင်သစ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုအရပ်၌ကျင်းပကြသည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအကဲခတ်, သင်တုန်လှုပ်ဖွယ်များနှင့်မဟုတ်ဘဲသာမန်ထက်မတ်မတ်အများကြီးတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်စင်မြင့်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်သမျှ၏ကြားမှအတွက်သာမန်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဥရောပတိုက်သားများအများစုနှင့်မဟုတ်ဘဲယူထားတဲ့နှင့်ပင်ကျိုးနွံပြင်သစ်စားဆင်ယင်အပါအဝငျ။ ဤသည်ကိုသူတို့ဖက်ရှင်အတိုင်းလိုက်နာမရိုးရှင်းတဲ့ပြင်သစ်စတိုင်ညွှန်ပြမထားဘူး - ကကောင်းသောအမူအကျင့်များနှင့်များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အဓိကထားကြော့ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ဥရောပမှာရှိတဲ့စားဆင်ယင်တက်အဖြစ်အကဲခတ်, သင်သည်ဤစတိုင်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ရှင်သဘောပေါက်ရန်စတင်ပြုလုပ်ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းခံစားရဘယ်အရာကိုပြင်ပမှဒါပေမယ့်လည်းတွေ့မြင်သောအရာကိုမသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ၏အမြင်, ကမ္ဘာ၏ပညာရေးနှင့်နားလည်မှု - ကကြှနျုပျတို့အားလုံးစိတျအပိုငျးင်ကျနော်တို့ခေတ်သစ်ကြိမ်အတူတက်သိမ်းထားချင်လျှင်, အဆင်းကိုဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်နဲ့အောင်မြင်ဖို့ရန်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့်နောက်ကျောကမ္ဘာတဝှမ်း 2013 ခုနှစ်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ဆှေးနှေးခရန်။ ပြင်သစ်အပြင်လည်းသူတို့ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကိုဖော်ပြနှင့်ဖက်ရှင်၏ရူပါရုံကိုမျှဝေဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အခြားနိုင်ငံများတွင်ရှိပါတယ်! ဥပမာ, ဖင်လန်ယူပါ။ ဖင်လန်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအမျိုးသမီးအဝတ်အစားတိုင်းပြည်များ၏ထုတ်လုပ်မှု၏အာရုံကိုအစဉ်အမြဲဆွဲဆောင်ခဲ့သည်၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားကျော်ကြားသည်။ ဖင်လန်နိုင်ငံ, များစွာသောဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာရှိသကဲ့သို့လည်းကမ္ဘာတဝှမ်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ရိုသေလေးစားမှုကိုရရှိနိုင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့၏ကျော်ကြားသော couturier, ရှိသည်။ ဥပမာ, ဖင်လန် Samu-Jussi Koski ကနေပါရမီဒီဇိုင်နာကိုယူ - 2012 ခုနှစ်တွင်သူသည်တစ်နှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်နာအဖြစ် "ရွှေကြိုးကွင်း" အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူဟာ« Samuji »ကိုခေါ်အမျိုးသမီးအဝတ်အစားစုဆောင်းမှု၏ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖင်လန်ဒီဇိုင်နာများကသူတို့အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းကြည့်ရှုရန်ပူဇော်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ဝတ်ဆင်ရရန်မည်သို့အကြောင်းမေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်။ အတော်လေးမကြာသေးမီကအစပြုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအတော်လေးအလျှင်အမြန်နှင့်သည် dynamically ဖွံ့ဖြိုးဆဲ - ဥပမာ, Mirkka Metsola ယူပါ။ အဆိုပါဒီဇိုင်နာသူ့အလုပ်မကြာခဏအလွတ်သဘောနှင့်တုန်လှုပ်ဖွယ်တစ်ခုခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ဤကိစ်စတှငျခေတ်သစ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုအလွန်စိတ်အားထက်သန်သည်။
ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့အဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုအချို့မှာအလွန်ကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာလည်း Minna တစ်ဦးမျှမျှတတအကျိုးအမြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မိမိအဝါသနာကိုဖွင့်ဖို့စီမံတဲ့သူလူငယ်တစ်ဦးဖင်လန်မိန်းကလေးပေးထားပါတယ်။ ပင်ကိုစွမ်းရည်နှင့်ဤလူငယ်ဒီဇိုင်နာများ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအများအပြားဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်းများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ စသည်တို့ကို Elle, နာမည်ကျော်, Vogue, လြယ္ကူနေထိုင်မှု၏စာမကျြနှာတှငျထုတျဝသူမ၏အဝတ်အစားစုဆောင်းမှု Minna ၌ဤနှစ်တွင်ယင်း၏အထင်ကြီးလေးစားမှောင်မိုက်သောအရောင်အဆင်းများစုဆောင်းခြင်းစဲပေးထားပါတယ်။
ဆောငျးရာသီ wear ၏ရွေးချယ်မှု
ဒီတော့ဘယ်လိုအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌စနစ်တကျဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့? ဒီမေးခွန်းအတွက်အဖြေကအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ အဝတ်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ကျန်းမာရေး, ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေနှင့်အခြားအချက်များသင့်ရဲ့အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ရွေးကောက်တော်မူရပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဝလွန်မိန်းမတို့အဘို့ပြုလုပ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအမျိုးသမီးအဝတ်အစားပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားကိုရောင်းသည်အဘယ်မှာရှိစျေးဆိုင်များ, ရှိပါတယ်။ တစ်ဦး curvy ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူအမျိုးသမီးစက်ချုပ်သောအခါ, ဒီဇိုင်နာအကောင့်ထဲသို့ထုတ်ကုန်၏အရွယ်အစား, ဒါပေမယ့်လည်းသူမပဲအကောင်းကိုကြည့်, ဒါပေမယ့်လည်းထိထိရောက်ရောက်အားနည်းချက်တွေကိုပုန်းဂုဏ်သိက္ခာကိုအလေးပေးပြောကြားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ရာမှတဆင့်၎င်း၏စတိုင်, မသာကြာပါသည်။ ဒါဟာအစ INSERT ရှုံးသောအခါတည်နေရာနှင့်အခြားသူများမှာညိုမည်းလာနေသည်, ရေးဆွဲအသုံးပြုကြသည်။
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်တက်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လို၏မေးခွန်းကိုတွင်, အဖြေအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် - တစ်အထူးပြုစတိုးဆိုင်ကိုသွား, သင်မူကားအထူးသဖြင့်ဝယ်ယူအမှုအရာများ၏အရည်အသွေးအချက်အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်းသတိရပါ။ ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, ရာသီဥတုပြောင်းလဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အပူကိုရှားပါးသည်။ သငျသညျအမွဲဖက်ရှင်လိုကျလြှောကျနိုငျသောကွောငျ့ဒီဇိုင်နာများ, အဆင်းလှစွန့်ခွာဖို့မကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအကြံပြုပါသည်။ ဤနှစ်တွင်အထူးသဖြင့်အမွေး INSERT နှင့်ကော်လာနှင့်အတူအလွန်အရေးကြီးသောအင်္ကျီဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌သငျသညျဖြစ်ကောင်းအေးခဲမည်မဟုတ်, ကြီးစွာသောကြည့်ရှုမည်။
Chiffon 2013 မော်ဒယ်များဆင်မြန်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ 2016 အဘို့အဆင်မြန်း
တိုတောင်းသောဆံပင်ပုံစံတွေ 2013 နှင့်အတူ stars
ဖက်ရှင်ဆောင်းဦးရာသီ 2013 ခုနှစ်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Burberry Prorsum - နွေဦး-နွေရာသီ 2014
GRUB - တစ်ဦးဂန္စာရွက်
အသီးမှအဆိုပါ feed ကိုဇီးသီး?
အနီရောင် caviar နှင့်ကြက်ဥနှင့်အတူသုပ်
Diphyllobothriasis - ကုသမှု
အဘယ်အရာကို Pekinese အစာကျွေးသလော
Black ကတရုတ်ရော့ Kardashian ခရမ်းရောင် Lamborghini ကမှလက်ဆောင်အဖြစ်လက်ခံရရှိ
စကင်ဒီနေးစတိုင်အတွက်တိုက်ခန်း - ကြော့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း
အဘယ်ကြောင့် Pantogam ခန့်အပ်ခြင်း, ဘယ်လိုကလေးများနှင့်လူကြီးများမှမူးယစ်ဆေးယူနည်း
ဇာ fingerless လက်အိတ်
အယူသီးမှုနှင့်အတူဆင်း:9ကြယ်တို့သည်လည်းမင်္ဂလာဆောင်အကွင်းပြောင်းပေးဖို့မကြောက်များမှာ!
Cystocele - လက္ခဏာများ
ခြေ၏ metatarsal အရိုးကျိုး